Mpamonjy voina 27 nahazo fiofanana hanatsarana ny asa sy famonjena - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mpamonjy voina an-dranomasina 27 ao amin’ny firenena dimy dia i Madagasikara, Afrika atsimo, Mozambika, Kaomoro ary Namibia.no nahazo fiofanana nandritra ny telo andro tao amin’ny Hotel Colbert Antaninarenina. Nanomboka ny 21 ary nifarana ny 23 novambra 2018 lasa teo tao amin’ny Hôtel Colbert Antaninarenina. Mohammed Drissi solotenan’ny Irmf na international maritime rescue federation ary koa John Carey, matihanina amin’ny resaka vonjy an-dranomasina avy amin’ny US Navy no nisahana ny fampiofanana.
Ny fiofanana dia teo ambany fiahian’ny minisiteran’ny fitaterana sy ny famantarana ny toetr’andro sy ny sampandraharaham-panjakana misahana ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy na ny Apmf (agence portuaire maritime et fluviale). Izay nandraisan’ireo mpamonjy voina 27 isa nandritra ny telo andro.
Misy ireo orinasa manome fitaovana ari-fomba ny mpiasany. Tsy ampy anefa ny fananana fitaovana manara-penitra sy ari-fomba. Ny olona hatrany no mampiasa ny fitaovana, noho izany dia mila mahafehy ny fampiasana izany fitaovana izany ny olona hampiasa izany. Raisina manokana eto ireo mpiofana ireto, mpamonjy voina eny an-dranomasina.
Midadasika be ny ranomasina efa olana goavana koa izany. Tsy maintsy voaomana amin’izany fahasarotana izany ny sain’ireo mpamonjy voina. Ny fanofanana no hany afaka manova ny olona hanana ny toe-tsaina ilain’ny asa. Izay ilay atao hoe mila mahafehy ny andraikiny izy ireo. Mitana andraikitra lehibe amin’ny fiarovana ny ain’ireo mpiantsambo ireto mpamonjy voina ireto. Araka izany dia hanatsarana ny fahaiza-manaon’ireo mpamonjy voina an-dranomasina eto Madagasikara sy ireo mpisahana ny vonjy voina rehetra no antony nanaovana izao fampiofanana izao. Tsy ny fananana fitaovana maoderina ihany fa ny fahaiza-manao koa no tena ilaina araka ny voalaza etsy ambony. Voadidina ranomasina i Madagasikara ka ilaina jerena ny tontolon’izany ranomasina izany. Mbola maro ireo toerana mitoka-monina eto amintsika. Mety ho vahaolana anefa izany fitaterana an-dranomasina izany hamahana io olana fitokana-monina io. Betsaka ireo vokatra tsy tafavoaka, misy amin’izy ireny aza tena simba mihitsy. Azo ampiasaina amin’ny fitaterana izany, na amoahana vokatra, na hitaterana olona. Mety mbola tsy ampy ny mpiasa an-tsambo eto amintsika ka ilana ihany ny fiheverana izany. Na ireo mpitrandraka eny an-dranomasina aza. Saika ireo mpanjono madinika no betsaka. Raha mitombo ny asa dia mitombo koa ny mpiasa. Mitombo araka izany ny loza.
Ny fiofanana tahaka izao no ilaina hanatsarana ny fahaiza-manaon’ireo efa amperin’asa. Ny mpamonjy voina aloha no nahazo tamin’ity indray mitoraka ity fa inoana fa hahazo toy izany koa ny hafa, eny tokony hihevitra hampitombo isa ireo mpiantsambo mihitsy aza isika.